Qoyska wax soo saarka CadCorp - Geofumadas
Dhowaan waxaan soo bandhignay badeecooyinka qoyska ka socda warshadaha ESRI, labadaba ArcGIS loogu talagalay miiska sida kordhin badanaaba
Xaaladdan, waxaan ka hadli doonaa qoyska CadCorp ee alaabooyinka, kiiskani codsiyada maabka.
Mid ka mid ah warbixinta ugu weyn ee CadCorp waa adkaysigeeda ku saabsan taageeridda heerarka Open Gis Consortium (OGC) taas oo ah mashruuc caalami ah oo diirada saaraya qeexidda ururin ballaaran oo ku saabsan qaababka dhexgalka ee GIS.
Muuqaal kale oo CadCorp ah meelo badan oo xooga la saaro waa helitaanka plugins inay akhriyaan, dejinta, dhoofinta ama la macaamilaan xogta laga warshado kale CAD / GIS sida ArcGIS, AutoCAD, Microstation, MapInfo, Oracle, SQL iyo kuwa kale.
Waxa kale oo ay xiiso u tahay pluginsiga si loo helo xogta wadaagay ilo kala duwan sida GeognoSIS.NET (OpenStreetMap, Google Earth KML, NASA iyo DataMap SYA) iyo GeoRSS, GPX, ArcIMS.
foomka xogta Demanejar by Cadcorp waa mid aad u kala duwan oo ka macquulka ah ee ArcGIS MXD oo si dhow ula ekaan in kala cayncayn ah, inkastoo ay xamili karaan database-dibada, sidoo kale database iyo map noqon kartaa hal fayl. Horaantii qaababka loo adeegsaday ayaa ahaa .bds, iminka waxaa loo isticmaalaa qaabka .sds, tan waxay u ogolaataa dhowr isticmaalayaal isbarbar socda hal fayl.
Waxyaabaha asaasiga ah ee CadCorp waa isku mid ganacsiga ESRI, dareen ahaan in aaladaha ka taga MapViewer ilaa Khariidadda Modeller ay u dhigmaan kuwa ESRI ee ka taga ArcReader una taga ArcInfo. In kasta oo isbarbardhiggu kaliya ku yaallo qaabka 'scalable', CadCorp wuxuu leeyahay xoogaa karti ah oo ArcGIS uusan lahayn. Faa'iidada ayaa ah in kordhinta laguma fidin boqollaal ka mid ah kordhinta ESRI in kasta oo ay u muuqato in tayada keenista iyo alaabada kama dambaysta ahi aysan gaadhin isla finlarkii la soo saaray ee lagu sameeyay ArcGIS ama kala cayncayn ah.
1 Muuqaal Khariidad
Tani waa akhristaha map, u dhiganta ESRI ArcReader, Arki karaa in ka badan oo 160 qaabab GIS / data BD u dhaxeeya ahbaa la ArcView SHP, Survey Ordnance NTF iyo MasterMap, MapInfo bartamihii / MIF / tab, AutoCAD billabo iyo DXF, Microstation DGN, ECW, GeoTIFF, baaraha, XML, GML, MrSID, Oracle Spatial iyo kuwo kale. Waxaa ku jira shaqooyinka asaasiga ah ee bandhigga lakabka, bandhig muuqda, bandhig muuqaal ah, daabac iyo hawlo kale oo hoose.
Markii hore Muuqaal Khariidad Waxay ahayd bilaash, hadda ma ahan, waxayna u keeneen suuqa si bilaash ah Khariidadda akhriska inkasta oo tan oo keliya aad arki karto faylasha la abuuray Cadcorp waxsoosaarka qaabka nalka.
2 Maareeyaha Khariidadda
Tan waxaa loo yaqaanaa maamulaha maabka, taas oo u dhiganta ESRI's ArcView waxayna u ogolaaneysaa in ay qabtaan, wax ka beddelaan, wax ka qabtaan, aragtida, falanqaynta iyo dhoofinta xogta. Muuqaal xiiso leh oo ah Maamulaha CadCorp Map Manager ayaa ah in hawshii ku dhowaadba ay leedahay haweeney si ay u orodo, inta badan baaritaanka goobaha, bandhigida shaandhaynta iyo daabacaadda waa qiimo. Waxay udhowdahay nidaamyada 250 ee nidaaminta khariidadaha, kuwaas oo lagu samayn karo duullimaadka oo lagu soo bandhigay isla lakabada khariidada leh saadaalooyin kala duwan.
Aragtid kale oo xiiso leh waa xaqiiqda ah in la rogo khariidad la dhajiyey ee falanqaynta mawduucyada khariidad cusub, oo leh hal gujis ... hubinta xiriirka asalka ah!
3 Khariidadda Khariidada
Tan waxaa loo yaqaanaa Tafaftiraha Khariiddada, wuxuuna bixiyaa aaladda Maareeyaha Maareynta, isagoo ku daraya xog aruurinta la dheereeyay iyo qalabka wax lagu duubo "Qaabka CAD" inkasta oo ay had iyo goor ka baxaan wax badan oo la doonayo ayaa xoogaa ka xoog badan kuwa ArcView oo aan ahayn inta ugu badan. ka Manifold. Waxay kaloo leedahay aalado horumarsan oo loogu talagalay falanqaynta xalaasha, abuurista macluumaad horumarsan iyo falanqaynta topolojiga. Waxay u dhigantaa ArcEditor qoyska ESRI.
Waxa kale oo uu leeyahay Editor awoodaha Map uusan haysan suurtagalnimada ee lagu kaydiyo xogta in walxaha Large Binary (Blobs) astaanta Iformix Datablade, iyo estendido OpenGIS helaan SQL in database-via Waxyaabaha Data X Active (ADO).
4 Khariidadda Khariidada
Tan waxaa loo yaqaan maps modeler, iyo ku darayaa shaqeynayaan falanqaynta sare, maamulka tridimencional, oo ay ku jiraan jiilka dusha, extrusion, taageero noocyo dhul digital (DTM), waxa kale oo aad ku qaadi karto image raster oo ku Qulqulka ayaa qaabeeyey oo wuxuu leeyahay awood muuqaaleedka OpenGL. Waa mid aan ku qanacsaneyn ArcInfo ee qoyska ESRI.
Meel kale oo kale waxaan arki doonaa balaarinta horumarinta.
Bogga rasmiga ee CadCorp: http://www.cadcorp.com
Caawinaadyo CadCorp ah oo faa'iido leh:
Post Previous«Previous Kordhinta ArcGIS
Post Next Qalabka Horumarinta CadCorpNext »